Apple iPhone အဟောင်းတွေအသစ်တွေကိုလှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့ Samsung Galaxy S9 ကြော်ငြာ – DigitalTimes.com.mm
6827 Shares 3437 Views
Apple iPhone အဟောင်းတွေအသစ်တွေကိုလှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့ Samsung Galaxy S9 ကြော်ငြာ
Samsung ကတော့ ကြော်ငြာဗီဒီယိုရိုက်တိုင်း Apple ကိုခနဲ့တတ်တာအရင်ကတည်းကပါ။ အခုလည်းနောက်ဆုံးထွက် Galaxy S9 ရဲ့ကြော်ငြာဗီဒီယိုနဲ့ Apple ကို ခနဲ့လိုက်ပုံက fan တွေကို စိတ်ဆွနေသလိုဖြစ်နေမှာကျိန်းသေပါပဲ။
ခေါင်းစည်းကိုတော့ “Moving On” လို့ပေးထားပြီး iPhone6အဟောင်းကို ဆက်သုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နေ့တာအခက်အခဲတွေကို အသားပေးရိုက်ပြသွားတာပါ။ ဖုန်းနှေးနေတာတွေ၊ ရေစိုမခံတာတွေ ဆော့ဖ်ဝဲလ်အဆင်မပြေတာတွေ စတာတွေက သူ့ကို စိတ်ဆင်းရဲရလောက်တဲ့အထိ အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးနေတာကို အပီအပြင်ရိုက်ပြထားပါတယ်။
Apple Store ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ Apple Genius က တစ်ယောက်က iPhone X ကိုပြောင်းသုံးဖို့ အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးလိုက်တဲ့အခါ သူမရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က?? သိချင်ရင်တော့ အောက်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။
အပြင်မှာဆိုရင်တော့ Apple fan က iPhone X ကိုပြောင်းသုံးဖို့အလားအလာများပါတယ်။ ကြော်ငြာဆိုတော့လည်း….
iPhone X ရဲ့ notch ပုံစံ ဆံပင်ကေနဲ့ လူကိုမြင်ပြီးမှ Samsung ဖုန်းကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပြထားတာဆိုတော့ notch ကိုလှောင်ပြောင်ချင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Samsung အနေနဲ့ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဖုန်းနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ခွဲလောက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကို ယှဉ်လိုက်တာကတော့ နည်းနည်းများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကြော်ငြာရဲ့ပေးချင်တဲ့ message ကိုက အဲလို iPhone အဟောင်းတွေကိုဆက်သုံးနေတဲ့ သန်းနဲ့ချီတဲ့ iPhone user တွေကို Samsung ရဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9+ ပြောင်းသုံးဖို့တိုက်တွန်းချင်နေတယ် ဆိုတာလေးပါပဲ။
Ref: PhoneArena, MacRumors
Samsung ကတော့ ကွျောငွာဗီဒီယိုရိုကျတိုငျး Apple ကိုခနဲ့တတျတာအရငျကတညျးကပါ။ အခုလညျးနောကျဆုံးထှကျ Galaxy S9 ရဲ့ကွျောငွာဗီဒီယိုနဲ့ Apple ကို ခနဲ့လိုကျပုံက fan တှကေို စိတျဆှနသေလိုဖွဈနမှောကြိနျးသပေါပဲ။
ခေါငျးစညျးကိုတော့ “Moving On” လို့ပေးထားပွီး iPhone6အဟောငျးကို ဆကျသုံးနတေဲ့အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ တဈနတေ့ာအခကျအခဲတှကေို အသားပေးရိုကျပွသှားတာပါ။ ဖုနျးနှေးနတောတှေ၊ ရစေိုမခံတာတှေ ဆော့ဖျဝဲလျအဆငျမပွတောတှေ စတာတှကေ သူ့ကို စိတျဆငျးရဲရလောကျတဲ့အထိ အမြိုးမြိုးဒုက်ခပေးနတောကို အပီအပွငျရိုကျပွထားပါတယျ။
Apple Store ကိုရောကျတဲ့အခြိနျမှာ Apple Genius က တဈယောကျက iPhone X ကိုပွောငျးသုံးဖို့ အစီအစဉျရှိမရှိမေးလိုကျတဲ့အခါ သူမရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက?? သိခငျြရငျတော့ အောကျကဗီဒီယိုလေးကိုကွညျ့ကွညျ့လိုကျပါ။
အပွငျမှာဆိုရငျတော့ Apple fan က iPhone X ကိုပွောငျးသုံးဖို့အလားအလာမြားပါတယျ။ ကွျောငွာဆိုတော့လညျး….
iPhone X ရဲ့ notch ပုံစံ ဆံပငျကနေဲ့ လူကိုမွငျပွီးမှ Samsung ဖုနျးကိုပွောငျးလိုကျတဲ့ပုံစံမြိုးပွထားတာဆိုတော့ notch ကိုလှောငျပွောငျခငျြတဲ့သဘောဖွဈပါလိမျ့မယျ။ Samsung အနနေဲ့ သူ့ရဲ့နောကျဆုံးထှကျဖုနျးနဲ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၃နှဈခှဲလောကျကထှကျခဲ့တဲ့ဖုနျးကို ယှဉျလိုကျတာကတော့ နညျးနညျးမြားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကွျောငွာရဲ့ပေးခငျြတဲ့ message ကိုက အဲလို iPhone အဟောငျးတှကေိုဆကျသုံးနတေဲ့ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ iPhone user တှကေို Samsung ရဲ့ Galaxy S9 နဲ့ S9+ ပွောငျးသုံးဖို့တိုကျတှနျးခငျြနတေယျ ဆိုတာလေးပါပဲ။
Apple iPhone 6Samsung Galaxy S9/S9 Plus
HTC U12 Plus ရဲ့ Specification များ ပေါက်ကြား